Gịnị bụ T47 ike mgbodo shei? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > T47 bracket - kedu ka ị si edozi
T47 bracket - kedu ka ị si edozi
Gịnị bụ T47 ike mgbodo shei?
Laghachi na nna ukwu ụlọ ọgwụ tech. Naanị ị na-egwu egwu, n'ezie ọ bụ nnukwu ekele maka Maazị Oliver Bridgewood bụ onye weghaara ụlọ ọgwụ tech na izu gara aga.
Ugbu a gịnị bụ ụlọọgwụ nka na ụzụ? Nsogbu achọrọ idozi hapụ ya na ngalaba nkọwa dị n'okpuru ebe a, m ga-agbalikwa ike m niile ịnwale ma dozie ya na mmemme na-abịanụ. N’etughi oge ozo, ka anyi bido. Ajuju izizi n’izu a sitere na BVDR - bvdr? Dunno. 'M̀ nwere ike iji eriri mechie akpa m dị n'okpuru? Aka nri, ị nwere ike, ahụrụ m ndị a dị egwu obere aluminom nkwụnye na-arapara n'ahụ na pịa a pịa-dabara ala mgbodo shei na ha na-eri, nke pụtara na ị nwere ike eri eriri mpụta n'okpuru ebe ahụ, nke bụ nkwado ala ọdịnala.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-eme na ọ pụtara na ndị biarin ga-ahụ na-aga n'ihu na gị ike axle na crankset na ọtụtụ anyịnya igwe na-ejikarị abịa ụbọchị ndị a ọ ga-abụ ogologo oge gafere ihe niile m na-agaghị - ọ nwere ihu ọma ọ dịghị ezigbo nzube. Nke ahụ bụ ihe m na-achọ ịpụ n’ebe ahụ. Amaara m onye zụtara ole na ole wee tinye ha n'ụgbọ ịnyịnya ígwè ha naanị iji kụtuo ha ma dezie ihe ndabere ala.
Mana inwere ike iji ihe edetu kwekọrọ na-agbanye ala. Gini bu ihe ahu? Enwetara m nke a site na Token nke dakwasịrị na tebụl m ụbọchị ọzọ. O sitere na ninja gi.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ bụ nkwado mgbokwasị pịa ebe a, mana ọ dị n'etiti n'etiti ebe a. Yabụ na ọ nwere ka akaukwu njikọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ. N'ezie, ị gaghịdị enwe.
Ga - etinye nke a n'otu akụkụ nke shei mgbodo ala ma were nke a gafee nke ọzọ ma ị ga - etinye otu n'ime - Oops, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ taa, anyị nwere obere ntụsara ahụ na gburugburu m. Naanị tinye ya n'ime ya ka ọ ga - abanye ya. Ugbu a ihe kpatara nke a ji nwee eriri etiti etiti, dịka ọmụmaatụ mgbe ụfọdụ anaghị ejikọ ya n'ụzọ zuru oke.
I nwere ike inwe iko oruru n’eme ka creaking. Nke a bụ ụdị ihe ngwọta na nke ahụ. Yabụ ee, ịnwere ike ịnwe nkwado akụrụngwa gị na igwe kwụ otu ebe.
Ọzọ bụ Ewin Kirk. Ewin nwere ọtụtụ ajụjụ, nke mbụ, n'ụzọ bụ isi, Ewin dị ka anyị niile. Ọ naghị atọ ha ụtọ ịnwe ịnyịnya ígwè na-ada oké ụda.
Mgbe ị na-agba ọsọ ma ọ bụ na-eme 'ịrị elu' enwere ụda 'ping' na-abịa site n'azụ ụkwụ. 'Ọ dị ihe dịka a ga - asị na onye na - azụ azụ na - akụnye ọnụ na - enweghị nsogbu, mana ọ na - eme n'agbanyeghị ebe igwe azụ nọ na cassette. 'Na ajụjụ nke abụọ - jiri anyaukwu -' Site na wiilị miri emi karị, achọpụtara m na valvụ valvụ ahụ dị na oghere ahụ.
Ọ nwere ụzọ ọ bụla iji dozie nke a? 'Ọ dị mma, dịkwa mma, akụkụ nke mbụ. Amaara m nke ngwaahịa nke ụlọ ọrụ akpọrọ Pro-Lite mere ma ha dị ka ndị na-ekwu okwu ma ọ bụ na-ekwu okwu wedges, ihe dị ka nke ahụ. Ha bụ nanị oghere 'n'etiti ọnụ abụọ ma gbochie ha ịpịkọta ibe ha n'ihi na nke ahụ nwere ike ịbụ nsogbu ahụ, ọ bụ naanị obere ụda ping ahụ mgbe ị na-etinye esemokwu n'etiti ha.
Dị ka m maara, ha bụ naanị maka agụba spokes. ma ha nwekwara ike ịdị maka ndị dị gburugburu. Ọzọkwa, ọ nwere ike bụrụ naanị esemokwu dị na nkwupụta na ọ dị mkpa ka enyocha, ọ dị ka ha nwere ike ịbụ ntakịrị ihe rụrụ arụ na nke ahụ bụ ihe na-akpata mkpọtụ ping a ka ha na-agagharị, ma eleghị anya ọnụ ara na oghere.
Nkebi nke 2 ihe ị na-ekwu banyere mpempe akwụkwọ flapper, nke a nwere ike ime ka gị na onye ọ bụla gbara gị gburugburu mara mma ka ị na-anya ụgbọala, ihe ị ga - eme bụ naanị ịdọ ha ebe, were onwe gị ụfọdụ teepu eletrik, tinye ha ebe ị na - amị gafere ezigbo valvụ ahụ ma tinye ya n'akụkụ sidewall ma ọ bụ rim. N'ezie mfe karịsịa ma ọ bụrụ na i nwere miri profaịlụ carbon ma ọ bụ aluminum wiil. Ọ bụrụ na ị na-eji akụkụ ọdịnala ọdịnala ọdịnala gị, ịnwere ike iji obere mkpọchi mkpọchi ị nwetara na sooks ọtụtụ n'ime anyị tufuo, ihe niile ị nwere ike ime bụ iji ya iji jide ya.
Ọ bụrụ na ọ nweghị nke a na - arụ ọrụ, na ngwọta kachasị mma nke ha niile, bụ ị nweta onwe gị tube ịbelata ma tinye valvụ tube tupu ịtinye ya na rim. Ya mere tinye ya ebe ahụ ma jiri ntutu isi ma ọ bụ egbe ọkụ, ihe dịka nke ahụ, mara nke ọma na ọ bụrụ na ijide ya nso nso sooks ọ nwere ike gbazee ya wee tinye ya na valvụ ahụ, dabara ya n'elu ezigbo rim dị ka ọ dị na mbụ. Ọ bụrụ na ị na-aga ugbu a, valvụ ahụ nwere ike ọ gaghị efepụ kpamkpam dị ka ọ mere mgbe ọ na-agagharị n'ezie, mana mkpọtụ ahụ ga-agbachi ma nyere gị na ndị ọzọ niile aka.
Na-esote anyị nwere Danuel Nue, onye kwuru, 'Hi Jon,' Enwere m ajụjụ gbasara usoro ochie: isi iyi mmiri. 'Can nwere ike ijide n'aka - nke ahụ bụ isi ihe m na - eche - tinye ụfọdụ mmanụ na ya? 'Ee, ọ dị mma. M na-akwado mgbe niile itinye griiz na isi mmiri nke na-agbadata na kọlụm nke ndụdụ n'ihi na ọ bụ otu n'ime akụkụ igwe na-ahụkarị nke nwere ike ịnwe oyi ma ọ bụrụ na ịchọrọ ma ọ bụ na-atụgharị oyi.
Nke ahụ bụ ihe anyị na-akpọ ya mgbe ụfọdụ mgbe corrosion na-eme. Ndị mmadụ etinyegoro ya n'elu osisi na mgbe ụfọdụ ka ha nwee ike ijikọ aka na mwepụ iji belata nsị ebe ahụ. Kpamkpam ọ dị mma, gaa n'ihu ma jiri ya.
igwe kwụ otu ebe ga
Ọzọ bụ Jim Logue, onye na-ekwu, 'Hi Jon, ekele maka' ngosi. 'I'mjọ na-atụ m na m nwere ike imebi wiil m.' Enwere m onye nkuzi turbo dị mfe 'nke na-ejide ụkwụ azụ site n'itinye' eriri abụọ ejiri ya na azụ ahụ na-atụgharị axle nke igwe kwụ otu ebe. 'Enwere ike ileda ihe ndị a anya' na-emebi emebi ma ọ bụ ka njọ? “Jim, enyi m, mba, o yiri ka ọ dịghị ewute ọ bụla n'ihi na tensioning usoro na-aga ozugbo na ịghasa na ngwa ngwa ntọhapụ na ndị niile nsogbu na-etinyere n'ebe ahụ.
Na n'ozuzu nke a na-aga site na oghere oghere ma ghara itinye ike ọ bụla na bebi ahụ ma ọlị, yabụ ị bụ ezigbo di ma ọ bụ nwunye, ejiri m ndị nkuzi turbo a ogologo oge tupu turbo nke ikpeazụ, ma ọ dịtụghị mgbe m nwere ụkwụ ọ bụla biarin mebiri emebi. Ihe na-esote bụ Garrett Born, onye na-ekwu, 'Mr. Jonathan Cannings: 'Oh ee, na aha Sọnde, ọ bụ eziokwu?' Enwere m oche oche a napụrụ. “Ama m, ama m na m gaara asachapụ ha n’oge. 'Enwere m obi ụtọ na ịdị elu nke sadulu' na
Emela atụmatụ iwelata. 'Ọ dị mma ịhapụ ya, ma ọ bụ' ka mmeghachi omume na oche oche na-eme ka ihe ndị ahụ ghara isi ike? ' 'Aka nri, amaghị m oke mmebi a na-emebi Amaghị m ihe ihe anyị na-ekwu maka ya. Ma ihe ọ bụla mere ụdị ihe ahụ nwere ike imebi ihe n’ime ya.
M ga-anọ n'akụkụ nchebe ebe a ma gbalịa ịpụ ya nke ọma ma dịkwa mma ma ghara ịnwa imebi ihe ọ bụla, nke bụ ndụmọdụ kachasị mma m nwere ike inye. Ọ bụ ezie na ndụmọdụ kachasị mma ga-abụ ilekwasị anya na mmezi gị, enyi, ọ gaghị eme. Ihe na-esote bụ Stuart Gay onye na-ekwu, 'Hi Jon, amaara m na ị hụrụ igwe igwe n'anya, ị nwere ike ịkwado otu maka otu Shimano 105 R7000 m nwetara ugbu a?' Nke mbu, Shimano adighi eme Gold Otu, ya mere anyi enweghi ihe obula.
Anyị nwere ụdị di iche iche dị iche iche batara n’uche na mbụ. Nke mbu bu KMC, ha na eme ọla edo. Taya emeakwaa iya ọla-edo; ha na - eme - ma n’eziokwu, echere m na ha kpọrọ ya titanium ọla edo, mana m chere na ọ bụ oji na ọla edo.
Ma ọ baghị uru n’echiche. Mana enwere m ike ezighi ezi n'ihi ya ọ nweghị ihe ga-echegbu onwe m. Ihe dị mma banyere ụdọ ndị a bụ na ha dakọtara na ndị nrụpụta otu dị iche iche ka ị wee dị mma.
Ọ bụrụ na ị nwere 9, 10, 11, ma ọ bụ ikekwe ọbụna 12, ha ga-emere gị ọla edo. I nwere R7000 yabụ na ị dị afọ 11, a ga-emecha ya, enyi m. Gaa n'ihu ma mepee igwe kwụ otu ebe.
Nyefee ya na igwe kwụ otu ebe dị mma, onye maara, enwere ike Ollie ga-akụ mgbịrịgba ahụ. Nke ziri ezi, anyị nwere Carina Marques onye na-asị: 'Ndewo Jon,' Hụrụ ihe nkiri ahụ n'anya, debe ya, 'na-enyeghị nkọwa banyere ihe kpatara m ji chọọ ime ya, mana' Enwere m ike ịdọrọ hy ahụ. na-agbanye mgbanaka na Shimano 'Di2 ST-R785 STI lever nke ejikọtara ya na Postmount BR-R785' diski breeki caliper na ngalaba ọhụụ, dị ka 'Shimano Ultegra ST-R8020 STI lever' tinyere 'BR-R8070 diski breeki caliper? 'Ya bụrụ otú ahụ, ihe niile ọ̀ ga-aga nke ọma? 'Daalụ.' Ee, ha ga-arụ ọrụ nke ọma n'ihi na ha niile na-eji mmanụ ịnweta mmiri arụ ọrụ na mmiri, ma na-elele anya abụọ m lere anya na tebụl ndakọrịta Shimano nke m mepụtara na m mere Mee ya aka n'okpuru oche m, ee ee ọ ga-arụ ọrụ nnọọ mma.
Mee ya ma ejighi m n'aka na m chọrọ ịma ihe kpatara ị ga-achọ ịme ụdị mgbagwoju anya nke Kiton na igwe kwụ otu ebe a, mana hey, enwere m obere nsogbu, na ụda ihe na-eme ka ị mee. Na nke ikpeazụ si Matt Meissner onye na-ekwu, 'Jon, Ana m eche banyere igwe eji agba agba ọhụrụ,' okpokoro agba aluminium mana agba ahụ dị egwu. Mgbe isiokwu ndị dị na 'Cheap Bike To Super Bike' gasịrị, echere m na ọ ga-agbasasị ma hapụ ya ka ọ na-egbuke egbuke. 'M ga-eji uwe mara mma kpuchie etiti ahụ tupu ojiji' iji chebe ya, ka ọ bụ na ọ dịghị mkpa? 'Matt, echeghị m na m bụ onye kachasị mma ịjụ maka eserese igwe ma ọ bụ ihe ọ bụla.
Enwebeghị m ezigbo mmeri. Ma hey, m ga-anwa, ọ bụ eziokwu, ee, karịa osisi aluminom, ọ ga-adị mma. Echetara m inwe GT Zaskar na mbido 90 nke yiri nkịta, a ghaghị ikwu ya.
Mana ihe ị ga-eleba anya ebe a bụ ijide n'aka na ị na-eme ka igwe kwụ otu ebe dị ọcha ma na-enwu gbaa dị ka o kwere mee n'ihi ee, ịkwesịrị ị tee ya. Gbalịa inweta varnish akụkụ abụọ ka ị wee nwee ike ịgwa mmadụ ụrọ nke maara ya ọfụma. Eeh, ị nwere ike ịpụ na mkpọ na-arụ ezigbo ọrụ, mana ha anaghị arụ ọrụ yana agba agba abụọ, yabụ agba 2K, anyị chọrọ ịkpọ ya na ụwa agba na m adịghị n'ezie na-enye a ọzọ inogide imecha na anya dị nnọọ ntakịrị mma, otu n'ime ihe ndị kpatara nke a bụ n'ezie iji chebe etiti si ọkọ, ma na-agbalị iji chebe ya ọ bụla ọxịdashọn nwere ike ime.
Mee ka m mara otu ị si eso enyi a n'ihi na m hụrụ ụlọ ala aluminom n'anya nwere ajụjụ maka ụlọ ọgwụ Tech, sonye na nkọwa ndị dị n'okpuru ma ọ bụ n'ụdị mgbasa ozi ọ bụla site na iji hashtag #askgcntech. Ọ dị mma, echefula ilele ụlọ ahịa GCN na shop.globalcyclingnetwork.com, anyị nwere ọtụtụ ihe iji lelee yana kwa gịnị kpatara ịdenye aha na ọwa ahụ wee pịa akara ngosi ngosi ka ị nwee ike ịhụ otu akụkọ na-ebi ndụ oge ọ bụla anyị na-ahụ otu isiokwu ịgbanwuo, nweta mgbịrịgba iji mee ka ị mara.
Maka edemede abụọ ọzọ dị oke egwu, kedu maka ịpị ebe a na nke ọzọ, ebe a. Ka ahụ oge n'adịghị anya.
Kedu ihe bụ T47 etiti?
NJ4jikọtara uru nke nnukwuukwu mgbodo shei, Mpaghara buru ibu maka ọkpọkọ ala na oche na-anọdụ iji jide ya, ya na eri nke ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya na-ahọrọ karịa sistemụ enwe. Omuma ejiri marashells okpu alaemeputala n’oge a eji igwe rụọ igwe igwe.Mar 21 2017
kedu ihe na-eme ụmụ okorobịa hey ịmaraworị na nke mbụ oge Sogia drone masịrị m na ọ bụghị nnukwu ego na ya mere achọrọ m iburu ya dịka ị nwere ike ịhụ ebe a, mmiri a anaghị adị oke ma ka anyị gaa n'ihu uh just gbanyụọ ya. Enwetara m ya ma ọ doro anya na ọ pere mpe nke na-eme ka ọ dị mfe karị ịga njem. You makwaara na m dị ka echiche nke obere obere mmiri wee hụ ma ọ bara uru ọ bụla nye gị, amaara m na enwere m nnukwu obi ụtọ ịnwale ya ugbu a na m malitere ịchọpụta etu o si apụta na ihe adịghị, yabụ lee, ọ dị, ọ dị ka ikpe siri ike n'akụkụ dị ka eriri carbon ma ọ bụ ụdị ụdị ịkpa akwa ma ọ na-ekwu n'ezie jụụ rc ọ bụghị jụụ rc cool rc na olile anya na ihe niile na-zipped elu ka anyị meghee ihe ọjọọ a nwa nwoke, yabụ ihe anyị nọ ebe ahụ mere ọganihu, ọ bụ Manwow, ọ dị ka na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie nke mara mma n'ezie ọ dị ka uhie iPhone na ndị dị otú ahụ, o doro anya na ọ bụghị ihe siri ike ebe a, ị gaghị atụ anya ya ma ọ bụ n'ezie dị mfe, niile plastik dị ka anyị nwere oghere transperent na ihu maka ọkụ anyị nwere ogwe aka ebe a nke dị ka ha na-apụ apụ ma ha dị ka ha na-ada ụda. Ha weghara ebe ahụ Amaghị m etu o si dị dị ka ha na-na na ịpị props azụ anyị nwere igwefoto na n'ihu oke Ọ dị ka ọ na spins obere na ala Anyị nwere a bit nke roba ụkwụ na otu ebe a kwa Bottom anọ nke na mgbe ahụ anyị nwere pịa unlock kpọghee ekwt ya anya dị ka batrị ogige bụ ebe a, n'ihi ya, mgbe m kwatuo a na anya dị ka na mgbe ahụ na nke a na-apụta, ya mere, nke a bụ batrị dị ka ụdị itinye ihe niile dị ebe ahụ gụnyere na ọdụ ụgbọ mmiri dị n'akụkụ ebe ahụ ka m wee kwụnye na azụ? ebe a na slide ya na-atụ, latch ya ọzọ na dị ka ị pụrụ ịhụ gị Mbipụta niile overcool na-achọ ike button n'ụzọ nile elu anyị nwere a di na nwunye nke ihe n'ebe ahụ m na-amaghị ma ọ bụrụ na ha na-eme ihe ọ bụla ma na ọ bụ na mgbe ahụ ebe a Anyị nwere akara anọ. Nke a bụ ihe njikwa dị iche karịa ka m na-ekpori ndụ onwe m yabụ echeghị m etu m ga-esi mee ya, mana ọ dị ka ọ kwesịrị ịdị mfe ma anyị nwere otu obere Nhọrọ nke isi mkpịsị aka enwe ọ thereụ n'ebe ahụ, bọtịnụ ike n'akụkụ ntụgharị yana mgbe ahụ ị nwere bọtịnụ mkpuchi ebe a makana ejighi m n'aka ma igwefoto dị ma ọ bụ na ọ nọghị, ọ dị ka ala na-emepe ebe a, ịkwesịrị itinye batrị na ebe a, ya mere, ee, okpukpu atọ batrị na-aga ebe ahụ ka anyị wee chọọ nke a dị ka anyị nwere akwụkwọ ntuziaka nke m kwesịrị itinye obere oge wee bịazie ngwa ọrụ ọzọ yana phillips screwdriver dị obere maka mgbakwunye props , nke a dịkwa mma ọ bụrụ na ị ga-agbaji ya wee lee ya anya dị ka anyị nwere eriri nkwụnye ụgwọ pere mpe nke agbanyụrụ site na usb ka m wee pụọ Ọ dị ka ọ na-abanye ebe a ebe Ọ dị mma ka m wee tinye ogwe aka ndị ahụ ebe a, m ga-egosi gị ọdụ ụgbọ mmiri na-akwụ ụgwọ ọ dị ebe a, nke a dị ebe a enweghị ike inye gị anya mbụ na ya ma ọ bụ ya, mmadụ, nke ahụ bụ isi ya na nsogbu niile yana enwere m obi ụtọ ịnwale ya Goulart dị ka obere ihe egwuregwu ụmụaka ka anyị kwụnye ya ụgwọ ka m gụọ ntuziaka ka anyị gbalịa yabụ ebe a ka m tinyere batrị batrị n'ime ime na bugoro ya agụgoro m ntuziaka na m ga-agwa gị na igwe a ma ọ bụ mmiri mmiri dị iche site na drones ndị ọzọ nakwa na o doro anya na ọ dị mfe ịchịkwa Somedị ​​ụfọdụ nke accelerometer ebe a, ị nwere ike ịhụ ihe dị n'akụkụ ebe a.
Anyị nwere oke ọsọ dị ala bụ ihe na-akpalite ebe a ka m were ya na ọ dị ntakịrị ọsọ ma mgbe ị kụrụ nke a na oke ọsọ nke a bọtịnụ dị ebe a bụ isi enweghị isi nke anọ bọtịnụ ebe a bụ mmezi, ogologo gị Presspị ise maka sekọnd abụọ bụ ihe mberede Kwụsị m na-eche na a ga-eziga ya na ala ma bọtịnụ nke isii ebe a bụ njikwa ọkụ m na-eche na ụdị ihu LED a na mgbe ahụ nke a bụ ọystụ gị mana ị na-achịkwa Ihe na-adọrọ mmasị bụ ịdị elu na ọystụ ị na-arịgo gbagoo ma ọ bụ jiri ọystụ tụgharịa aka ekpe na aka nri, mana ị na-agagharị na azụ site na ịpị ọystụ ahụ ka i wee mara na ị na-eme ọtụtụ ihe ebe a kwesiri icheta, nke ahụ doro anya na ị maara na ọ bụ ihe egwuregwu atọ nwere akụkụ na mgbe ahụ ị dabere ya site n'otu akụkụ ruo n'akụkụ n'ihi na ị maara na ị na-atụgharị drone ahụ site n'akụkụ ruo n'akụkụ ren dabere ka ị mara mgbe m dabere nke a ọ na-emegharị n'akụkụ akụkụ ma mana mgbe m jiri ọ itụ ọ ga-atụgharị ka njikwa ahụ bụrụ naanị njikwa akụkụ , okay nwoke m pre Enwere m obi uto na m ga-ada obere nwatakiri nwoke a ka m wee gaa n'ihu wee nweta ebubo a suụ, enwere m olileanya na nke ahụ bụ ihe niile m ga-eme, echere m na ọ bụ ụzọ abụọ n'ihi na ìhè na-acha uhie uhie mgbe niile. jide bọtịnụ mmezi a maka sekọnd abụọ na nke a ga-emezi. Echere m na ịchọrọ ka onye dịpụrụ adịpụ bụrụ ụdị vetikal na ewepụghị n'ihi na ọ ga-edozi ya dabere na h ị ga-ejide ya maka sekọnd abụọ jidere anyị ga-enweta obere ọkụ ma ugbu a, mezie ya ma echere m na m gbanye onye nchịkwa ahụ ebe a oh e wegookay dude ị hụla ihe a ka ọ dị ka ị kụrụ nke malitere ya wee bụrụ ihe na-atọ ọchị bụ n'ihi na m guzo n'ofe site na Itoally ka ọ nwere ụdị ụzọ na-ezighi ezi ka m wee chee na m ga-emezigharị ya ọzọ ma ọ bụ jikọta ya wee mezie ya , na mgbe ahu ezutere m Theokay, ihe igaghi ahu ebe a oh bu na amaghim ihe m bu, odi m mma ma lelee ya oh nwoke ah ka anyi gbalia ozo anyi ga eche na anyi ka mma itinye ha na agbanyeghị jiri ihe mara mma mwute dị mma m ga-aka mma m chere na ọ bụ ihe dị mma na njikwa na-arụ ọrụ otú ha si eme n'ihi na ọ nwere ike ịta ntakịrị Chen bụ kensinammuo n'agbanyeghị eziokwu na ị na-amụta na a kpamkpam dị iche iche ụzọ karịa ọtụtụ drones na otú m n'ezie ụdị ihe bara uru, ntakịrị nri, nke ahụ apụtaghị na ọ dị mfe, l amprey, mana wow, nke ahụ dị mma. Amaghị m ụdị eserese ọ bụ. Echere m na ọ bụ bọtịnụ atọ ahụ m nwere nnukwu ego iji tinye igwefoto na n'akụkụ nke ọzọ, ụmụ nwoke na-achọ ka mmiri ọ bụla, ọ dị ntakịrị ma ọ dị mma ma aga m eme ihe n'eziokwu na ọ ga-abụ obere mmetụta, enwere ike weghachite ya akara a nakwa nke ya. ugbu a ọ na-aga mara mma ngwa ngwa n'èzí m ga-eme obere ihe ụtọ na-akpụ akpụ ya mana ọ na-ewe obere oge dịka ị nwere ike ịhụ iji gbochie ya mana mgbe ị na-eme nwoke ahụ dị jụụ m hụrụ ya n'anya na babyall Ka anyị hụ na anyị mere obere foto ụmụ agbọghọ ihe osise ogologo nke ọdọ ụgbọelu dị ka ọ dị
Kedu ka m ga-esi amata ntọala Shimano m?
Mkpụrụ obi mgbokwasị nwere obere dayameta dị ka BB86 n'ozuzu ha ga-abanye na nkwonkwo nkwado ala na ọkpọkọ bekee iji mezuo ihe PF30 (46mm) ịmalite ikpo okwu nwere ike iji obere tubing pere mpe.Ọgọst 19 2019
nabata n'ụlọ ọgwụ gcn tech bụ ebe anyị ga-achọ ịza ajụjụ gị na nsogbu gị na mpaghara ịgba ịnyịnya na ị nwere ike ịdebe ajụjụ gị site na iji hashtagaskgcntech na ngalaba ndị dị n'okpuru ebe a na mgbasa ozi mmekọrịta. Ya mere ajụjụ mbụ nke izu a na-abịa n'echeghị anya site n'aka onye isi obodo ma ọ bụ onye na-agba ịnyịnya, bụ onye na-ekwu na rim na blọk na-agbaji n'ime ha dịka a ga-eji ncha mee, mmiri ole na ole na mmiri na-enweghị ihe ọ bụla na-emebi ihe na-efu m a Uwe ejiji akwa bu otu ihe ndi di ka otu eriri, nke oma, ufodu ndi mmadu mebiwanye ma o dabere na ihe di iche iche ebe i na-anya ugbo ala, uzo i si anya ugbo ala, imara uzo ichoro, otu ha si di ocha oge nke afọ, kedu ka ịmara nke ọma etu sistemụ arọ dị na igwe kwụ otu ebe, ọ bụrụ na ị gafere ọtụtụ, enwere ihe ole na ole m ga - atụ aro ijide n'aka na ihe niile dị ọcha dịka o kwere mee ka mgbe ị gachara hụ na ị na - eme Rub pụọ na rim gị ma were ákwà na ihichapụ unyi ahụ. Ihe nkpuchi breeki onwe ha na-eme ka ha dị ọcha, n'ihi na ọ bụrụ na irighiri unyi na-arapara na ha, mgbe ahụ ọ nwere ike ịdị ka ụdị sandpaper r na-eme ma bụrụkwa ihe abrasive na rim elu na paịlị nwere ike bụrụ igwe kwụ otu ebe na diski breeki n'ihi na ọ dị ọnụ ala karịa mezie diski na pad ndị a kara nká karịa iji dochie anya wiil niile mgbe rim ahụ gafere.
Ajụjụ na-esote n'aka Camucho bụ onye na-ekwu, gịnị ma ọ bụrụ na nkwado ala m na-eme m mkpọtụ mkpofu mara mma n'isi m, ọ ga-akwụsị m n'etiti? ọ na - anaghị egbochi gị n'etiti ya. Ọ bụrụ na nkwado ala ala apụla, ịnwere ike ịnya ya n'ụlọ na ya, ọ na - abụkarị ihe na - egosi oge iji mara ma nkedo ala gị apụla n'ihi na enwere ọtụtụ egwuregwu na biarin, ọ na-abụkarị ihe na-abụghị nanị n'ihi na mkpọtụ, n'ihi ya, mgbe ị nwere ike ịkpali gị crank ogwe aka ọzọ ị maara na ị na-eji ya site n'akụkụ ruo n'akụkụ na e nwere n'ezie a bit nke play na bụ ihe ịrịba ama na ọ bụ Nke a bụ ihe ekwesịrị idozi ma dochie anya ya. Nke a pụtara na ị ga-achọ ọhụụ ọhụrụ.
Ihe kpatara nke a bụ na agbụ ahụ na - agagharị ntakịrị mgbe enwere nwayọ nke nwere ike ịpụta na ị nwere ike idobe agbụ gị mgbe gị na gị nọ na ị chọghị ọkachasị mgbe ị na - apụ na sadulu gị nke nwere ike ịdị egwu dịka ị nwere ike ịda na kwa gia gi nwere ike imebi gi nke oma, ma oburu na o na eme mkpu, inwere ike iwepu ya, hichaa ma chere, gharia ma weghachite, i mara na anyi na ekwu maka ya otutu, ma akwa nkpuchi bu ihe ama maka ịme mkpọtụ na mkpọtụ na-eme ya ọ bụ ihe kwesịrị ile anya. Hụ na ọ bụ ihe nkwado dị n'okpuru na-eme mkpọtụ ndị a, nke doro anya na ọ dị mma, mana na ahụmịhe m ma ị maara ụmụ nwoke ndị ọzọ niile anyị nwere igwe kwụ otu ebe ọfụma? ebe anyị swụrụ iyi na ọ bụ ntọala mgbodo nke mere mkpọtụ ahụ, naanị ịchọpụta na ọ bụ ekweisi ma ọ bụ ogwe aka ahụ, ma ọ bụ akụkụ ọzọ nke igwe kwụ otu ebe gị nke ị na-echeghị na ọ nwere ike bụrụ mgbatị ụkwụ, yabụ chọpụta nke ọma nsogbu ma lelee ma o bu nkuku aka ozo ozo ajuju ajuju a si brucelangsteiner o kwuru na m nwere okpokoro igwe eji eme ka m choo ikwalite ihe mgbakwasa ukwu na crank setto uh shimano holotec threading in my frameis Italian nke a bu ihe puru ime ee enwere ihe puru ime eme na um bu n'ezie nsogbu ugbua bu na oburu na inwere nkpuru nchara ochie mgbe ahu odi ka oghoghari nkpuru ala ya di n’ime ala ya, iko ndi ozo di iche? Banye na etiti ahụ dịka ịchọrọ na carbon carbon na eri ndị dị n'okpuru nkwado bụ intali, nke ahụ dị mkpa ebe a, yabụ ugwu Bsabottom nwere eriri nwere eriri na-emegiderịta onwe ya n'akụkụ ọ bụla nke nkwado nkwado ka ị nwee ike iji n'akụkụ aka ekpe nke You enweghị ike ịtọghe mgbodo ụkwụ gị ị na-akụ ụkwụ n'otu ụzọ ahụ pedal ugbu a nwere eri na-esote na aka ekpe na aka nri aka Italiantali nkenke nkenke aka ochie Ha nwere otu aka nri aka nri n'akụkụ abụọ nke nkwado ahụ, ọ bụ naanị ihe ochie meworo ochie, mana nke ahụ pụtara na ị nweghị nke ị nwere ike itinye ihe nkwado ala ọzọ na eri a ma ọ bụrụ na ị ga-anwale, mana echegbula onwe gị, ị nwere ike iji mgbodo ala ala Italiantali nke na-arụ ọrụ na aholotech Shimano crankset. Amaara m nke a n'ihi na Pinarello m jiri otu pinorellos kachasị ọhụrụ nke jiri akara ala Italiantali bịa ụbọchị ndị a, m wepụtara ọkọlọtọ m bụ Shimanoholotecchain ka anyị bido n'ajụjụ ndị ọzọ si Kevins Wedlo bụ onye kwuru etu o siri bụrụ ndụmọdụ maka ịchekwa igwe obere ụlọ, nke na-emekwa ka ọ dị mfe ịbanye na ịpụ na-aga.
Nke a bụ nsogbu nke ọtụtụ mmadụ ga-emeso onwe ha.Ebi m n'otu ụlọ ma kwụba igwe kwụ otu ebe m n'elu mgbidi dị n'elu ekwú ọkụ, ugbu a emeela m ihe mgbodo n'ime mgbidi na-ejide ya. dị mma nke ukwuu, ọkachasị ọ bụrụ na ị banyere igwe kwụ otu ebe, ọ dị mma ma ịnwe igwe kwụ otu ebe mara mma ọ dịka ọrụ nka na mgbidi, gbaa mbọ hụ na ọ dị ọcha mana lelee onye nwe ụlọ gị ma ọ bụrụ na ọ bụghị ụlọ gị ma ọ bụ ụlọ gị. tupu ịmalite mkpọpu ala oghere na mgbidi ị ga-eme n'ezie, mana ọ bụrụ na ịchọghị ịkụpu oghere na mgbidi ahụ enwere ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ yana nko ị nwere ike itinye na azụ ọnụ ụzọ ka ị nwee ike kwụba igwe kwụ otu ebe gị n'azụ ọnụ ụzọ, anyị nwere otu n'ime ha na gcn setịpụrụ nke na-arụ ọrụ nke ọma ma na-emekwa nnukwu nkwụnye aka nke dị ka mkpanaka ị nwere ike itinye n'etiti d ọ nwere ike ikpokọta ala ala na ala akara ahụ. na mgbe ahụ erughị ala ya na kposara, na mgbe ahụ ị pụrụ nanị kpọgidere anyịnya igwe na ha, nke bụkwa Ezigbo ihe ngwọta ma ọ bụrụ na ịchọghị ịmalite olulu na ụlọ gị jrg 106underscore aha a na-adịghị ahụkebe kwuru na ọ na-esiri ike iyi iko ịnyịnya ígwè mgbe ọchịchịrị na mmiri na-ezo, mmiri mmiri ozuzo na-eme ka m kpuo ìsì. gbochie nke a dị ka iko igwe ịgba okirikiri kacha mma nwere ezigbo mmiri hydrophobic na oghere nke ga - enyere aka kwesịrị ịtụgharị mmiri ozuzo, mana ọbụlagodi na ị hụrụ agbụrụ ndị ọkachamara ebe mmiri ozuzo na - ezo, dị ka ọ na - adịkarị na ndị ochie ma ọ bụ Perryroubaix ma ọ bụ ihe yiri ya, ị ga-ahụkarị na-ahụ uru ndị ahụ na-akwụsị iko ndị dị n'azụ isi ha ma ọ bụ tinye ha na okpu agha na nke ahụ bụ n'ihi na enyo ahụ enweghị windshield, echere m na ọbụlagodi na mkpuchi hydrophobic ị ga-ka ruru unyi mmiri rapaara na ya nke na-eme nwute na-eme ka ịhụ ihe siri ike ee ee enweghị nhọrọ karịa nke ahụ, ọ bụrụ na ọ dị njọ, enwere m ike iwepụ iko gị, nke ọtụtụ uru na-eme, mana ị nwere ike soro ụfọdụ hydrophobic co atings na-anwale na iko gị nke mere ka otu isiokwu na-ele anya mkpuchi nke hydrophobic na ezigbo onwe gị .Gbalịa mee ka ọ ghara ịdị na-eguzogide ọgwụ mana ọ nweghị ihe kpatara na ị nweghị ike itinye ihe yiri iko gị M na-anwale ya. Ajụjụ ikpeazụ n'izu a sitere na Eclipselex bụ onye na-ekwu oke ngosi bụ ihe ọ watchingụ na-atọ ụtọ mgbe niile na-amụ ma na-amụta site na ya Ekele nwoke m chọtara Pinarello 2004 ihe ịtụnanya nwere nke nwere mpempe akwụkwọ kwụ ọtọ yana ịghagharị na ọ ga-ekwe omume ịme ya n'otu ọsọ na-enweghị iji ihe na - eme ka esemokwu dapụtara siri ike ka m kọọ n’enweghị ike ịhụ ndapụ ọkara gị n’ihi na ọ na - adịkarị gị mkpa ka ị kwụpụ iji nyara ịnyịnya ibu n’otu ọsọ ka ị wee nwee ike mịghaa azụ na - aga n’azụ iji nweta esemokwu zuru ezu. N'ihi na ị naghị eme ya, ọ bụrụ na azụ azụ anaghị anọ iji mepụta esemokwu ahụ, azara m ajụjụ yiri ya banyere ụlọọgwụ ọgbara ọhụrụ na nkebi abụọ gara aga, mana ị nwere ike ịnwale ya wee hụ otu ị ga-esi gafere, mana ị nwere ike ca n, ọ bụrụ na ịnweghị ike ime nke a ma ịchọghị iji agbụ ígwè iji nweta mgbatị ahụ, otu azịza ahụ metụtara dịka tupu nhọrọ kachasị mma ga-aga yana ụlọ ọrụ na-emepụta esemokwu zuru oke ị ga-enweta oghere eccentric na wiil azụ gị nke ọma nke ahụ bụ ihe niile anyị nwere maka izu a ma kwuo na ngalaba ndị dị n'okpuru eos ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwado ọwa ma ọ bụ nweta gcnapron ka ị nwee ike ịmezi onwe gị ma debe onwe gị ọcha isi gaa gcn shop nke anyi nwere ibu
Kedu ihe nkwado kachasị mma?
Nabata na Jụọ GMBN Tech. Nke a bụ ngalaba na ọwa ebe anyị na-aza ajụjụ ajụjụ igwe kwụ otu ebe gị kwa izu. Echefukwala itinye ajụjụ gị na ihe ndị dị n'okpuru ebe a ma ziga ha na adreesị ozi-e na ihuenyo ahụ ugbu a.
Nke mbu, anyi nwere ajuju si n’aka Sean Jones, nke a bu ihe di omimi n’ime ihie n’elu ala Bottom bracket world bu ebe ana egwuputa ala, ị nwere ike inye m obere? Ozo ịkọwa ụdị dị iche iche na uru na ọghọm nke ọ bụla? (Slapping egbugbere ọnụ) you dịla njikere maka nke a? Enwere ọtụtụ ozi ebe a ka m wee debe nkenke mara mma n'ihi na echere m na a ga-enwe ọmarịcha ederede si ebe ahụ na anyị nwere ike ime ya ma emechaa. Mbụ anyị nwetara ochie eri. Ọ bụ ihe igwe igwe nwere igwe millimita iri na asaa nke nwere onu ogugu na njedebe.
E kpochapụrụ cranks na ya ma mgbe ahụ ị ga-enwe nkwado ala na etiti ahụ nke ọma, ma ọ bụrụ na eriri gị agbachi, ị ga-ebu isi njedebe nke crank ahụ n'ihi na ọ bụ nke aluminom dị nro site na nchara nchara, ọ gaghịkwa eme ikesiike nke ọma. O mere ọtụtụ ihe na aka ekpe gị. Tụkwasị na nke ahụ, ihe nkedo dị n'ime anọkwaghị ebe ahụ mgbe obere oge gasịrị, ha dara, ihe nkedo a na-echedo ala, nke mara mma ozugbo ogwe aka ala mebiri onwe ya, tụfuo ma tinye nke ọhụrụ.
Ọzọ ị ga-aga na nke nkịtị, ot threaded ala mgbodo na ọtụtụ ugwu anyịnya igwe ka nwere e nwere 24 ml ígwè axle, na axle na-enwe obi n'otu akụkụ nke crank, dabere na emeputa, ma ọ bụ aka ekpe ma ọ bụ aka nri, na ebe bụ mpụga biarin. biarin bụ oke mma, a kara ha akara nke ọma, ha na-achọkarị ịrụ ọrụ ha nke ọma. Ma dị ka ọ bụla biarin na ala brackets, nsogbu ahụ abụchaghị nha ma ọ bụ ọnọdụ nke biarin gị.
Ọ bụ mgbe niile banyere ebe apịtị na unyi nwere ike ịbata. Nrụ ọrụ a ga-arụ ọrụ zuru oke maka ibu nke ihe ị gabigara. Ozugbo ha ruru unyi, ha ga-ebibi onwe ha ma ị ga-anọchi ebe ndị ahụ.
Ọ bụ ya mere anyị ji agwa gị mgbe niile ka ị ghara iduzi bearings na jet-asa saa. Ihe na-esote bụ BB95. Nke a mepụtara site na Trek na nke ahụ bụ ụzọ nke iji axle nke otu nha site na ịkwanye ebe ndị ahụ na-abanye na etiti ahụ. Mereframe iji nabata nke ahụ.
Dị oke ọnụ iji rụpụta. Ikwesiri ido anya nke oma. E nwere ụfọdụ ndọghachi azụ ndị ọzọ.
Y’oburu n’acho igba oso ndu onye ozo n’oge ha putara i nweghi ike n’ihi na onweghi iko n’enwe ya. Anyị mechara nweta ihe nkwado ISCG, International Standard Chain Guide, nke ahụ nyekwara aka ị nweta nsogbu a. Nke na-esote ụkwụ 86 na 92 ​​na-agba ọsọ.
ịnyịnya ibu arọ ọnwụ
Ọ bụ otu usoro ahụ dịka BB95, mana kama ịnwe osisi dị oke ọnụ nke ịkwanye ha, ha nwetara nke a site n'inwe ntanye na obere kọmpụta plastik ndị ahụ na ha na etiti Pịa. Nke a mere ka etiti ahụ dị ọnụ ala karịa imepụta ya. O nweghi ihe nkwado nke nwere eriri na-agba n’ime ya.
Ọ na-arụ ọrụ nke ọma, mana nrụnye bụ isi. Ọ bụrụ na ị nwetaghị ya, ha ga-ama jijiji ma gafee oge, na sistemụ ụkwụ ụkwụ niile, ha hụrụ n'anya ma ọ bụ kpọọ asị .Amasịghị m ha n'anya n'onwe m, achọrọ m eri eri.
Ọ na-amasị m ka ọ na-arụ ọrụ. Ka oge na-aga ị maara ihe ga-eme ya. BB30 bụ onye na-esote kụrụ n'ahịa ahụ.
O yiri BB95 nke ukwuu belụsọ na ọ bụ axis 30 millimita. E ji aluminom mee ya. Ngwurugwu dị ukwuu karịa, sie ike ma dịkwa mfe karịa nhọrọ nchara 24 millimita.
Ihe ọghọm bụ na ụlọ nkwakọba ihe ndị pere mpe. Ọzọkwa, biarin abụghịrịrị nsogbu na nke a. Ọ bụ otú ha si rapaara n'ime etiti ahụ na n'ezie mmetọ ahụ mere ka ha daa.
Ugbu a SRAM emela ọkwa banyere usoro dub ọhụrụ ha. Nke a bụ ihe ọhụrụ crank axle na ala mgbodo usoro. Ihe dị mma banyere ya, ọ chọghị osisi ọ bụla na-abụghị nke ị nwere, n'adịghị ka ọdịiche ndị ọzọ niile, ịkwesịrị ịnwe otu osisi akọwapụtara maka ala ọ bụla, ị na-eme usoro maka sistemụ nke ọ bụla dị ugbu a , BB30, eriri nkịtị, wdg.
Ma echiche bụ na biarin ahụ na-anọ n'otu ọnọdụ n'agbanyeghị agbanyeghị usoro nkwado ị nwere. Nkwụnye ahụ dị n'èzí ma ị nwere axis crank, 30 ml axle, mana ọ bụ n'ezie 28.99 ml, ya mere dị n'okpuru.
SRAM na-ekwu na nke a nwere ike ịba ụba nha. ọ bụ eziokwu na biarin na-emecha kaa akara. SRAM kwuru okwu banyere nsogbu nke mmetọ na-abanye na ebe a.
Anyị achụpụbeghị ya nke mere na anyị enweghị ike ikwu okwu na ya, mana ọ bụ usoro ohuru ma ị ga-ahụ nke ahụ n'oge na-adịghị anya. Ọzọ, Christian Rahi na-ajụ, ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị maka onye na-apụnara mmadụ ihe ka ọ ghara ịgbanwegharị n'okpuru ibu dị arọ, dị ka mgbe ị na-eji nwayọ na-agba ugwu dị larịị? Enwere m ntọala SRAM X5. Ee, mara mma nke ukwuu.
Ikwesighi igbanwe n'okpuru ibu. Ikwesiri ịhapụ mgbe ọ bụla mgbe ị na-agbanwe, oge zuru ezu maka agbụ ahụ ịwụ elu. Ọ bụrụ na ị na-ele anya azụ azụ, ị nwere ike ịgbanwe nke ukwuu karịa nrụgide, nke ahụ bụ n'ihi na nha okpu dịkarịrị nso nke mere na agbụ ahụ agaghị awụlikwa elu n'akụkụ ọ bụla.
Ma i nwere ike imebi gị yinye na mgbe ụfọdụ gị n'azụ mech site ịmafe kpamkpam nrụgide. Maka ihu, ị ga-atụle etu mbido ahụ si buru ibu, kwuo mgbanaka nne nne ya, nke obere, na etiti, ma ọ bụ nke ọzọ. Nke ahụ bụ mmụba dị ịrịba ama.
Ọ bụrụ n’ịgbalị igbanwe n’ibu, ị n’ezie na-ejide ya na olu gị karịa agbụ na-anwa ịwụnye na mgbanaka ọzọ. Buru nke ahụ n'uche ma gbalịa ime ka gia gị gbanwee ka ọ dị mfe. Ihe na-esote bụ ntakịrị nkwụsịtụ.
Site na Steven Daniels. Dabere na Internetntanetị, Rockshox Recon 32 ml enweghị okpu eri maka itinye spacers olu. Ọ bụrụ na m nweta okpu ejiri ejiri Rockshox 32 ml, enwere m ike iji akara ngosi? Ọ bụ otu ihe ahụ dị ka gị scout.
Have nwere tokens na nke gị? Ndụdụ na igwe kwụ otu ebe n'azụ m, mba, ọ bụghị n'ezie. Ọ fọrọ nke nta ka m gbara igwe kwụ otu ebe dị ka igwe kwụ otu ebe. M gbanwere taya na ihe ndị ọzọ na ihe ndị ọzọ.
Ọbụna etinyeghị oke, ụgbọala na Alicante, na m chọrọ itinye obere spacers ole na ole. M ga-ahụ nke a n'abalị ụnyaahụ. Ọ bụrụ na i lee foto ndị ahụ na ihuenyo ị ga-ahụ ntakịrị nsogbu ebe a.
Rockzọ Rock Spacs spacers kwesịrị ekwesị bụ na ha na-agbanyekarị na okpu elu. Dịka ị si hụ site na okpu elu a, enweghị eriri ọ bụla na ya, mana nke ka njọ, ụdị nke ndụdụ a bụ otu n'ime ndụdụ ha dị ọnụ ala. Enwere igwe ikuku ikuku dị iche iche n'ime.
O nwere ikuku ikuku buru ibu nke na-aga elu ya na okpu elu na-abanye na ya, yabụ enweghị ohere ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịtinyela okpu sitere na Mkpughe ma ọ bụ ihe yiri ya. Ma ị nweghị ike ịga tinye mmanụ n'ime ọkpọkọ iji belata oke ikuku, n'ihi na mmiri na-adịghị mma na-arụ ọrụ na ndụdụ a. Aga m eleta otu enyi m nke nwere nhicha nke na-emechi obere akpa nylon ma echere m na anyị nwere ike ịme olu nke anyị ka ọ dị ntakịrị ka anyị nwee ike ịkọwa ihe dị ka spacers olu atọ ga-adaba na okpu plastik ahụ.
Nwee ndidi, aga m emelite na ibe Facebook, ibe Facebook nke GMBN Tech. Aga m eme ka ị mara ka anyị si aga na nke a. Enwere m mmasị na ajụjụ a site n'aka Simon Plaickner, ana m anụ na ụfọdụ uru EWS, nke ahụ bụ Enduro World Series, jiri ọla na ihe mgbochi breeki na breeki ha, na na tiori nke a kwesịrị ijikọ uru niile na-enweghị nnukwu breeki.
Nkuzi igwe kwụ otu ebe
Nụtụla ya mbụ? N'ezie, Achọrọ m ịnwale nke a ogologo oge n'ihi na ị bụ nri maka igwe brek, mana ha na-ewe oge iji kpoo ọkụ iji nweta arụmọrụ kacha mma, yabụ resin ma ọ bụ ihe ndị na-edozi ahụ ga-edozi ha nke ọma . Nwere ike ịnwe breeki dị jụụ na, ebe m na-ala azụ ebe m na-agba ịnyịnya, achọpụtara m na n'ọtụtụ agbụrụ, anaghị m agbaji breeki maka ihe mkpuchi breeki iji kpoo ọkụ ma m ga-ejedebe na mmiri mmiri na-asọ oyi. Ọ na-abụkarị mgbe ọ dị ntakịrị mmiri ma ọ bụ n'otu n'ime ụbọchị ndị a na-eme ememme ụtụtụ, ọ nweghịkwa ihe jikọrọ ya na breeki anaghị abanye nke ọma.
Ọ bụ kpomkwem eziokwu na ha adịghị ewe iwe dị ọkụ. Ee, ụfọdụ ndị ọkwọ ụgbọala na-eme nke ahụ. Enweghị m ndepụta aha gị n'elu isi m, mana amaara m na Greg Minaar mere nke ahụ na Cannes n'afọ gara aga na ọpụpụ.
Na brek ya o nwere Shimano nke eji ngwa resin na igwe mee ya. Ọ bụ n'ezie nri maka iche echiche breeki ma nwalee ya maka onwe gị. Ọ ga-amasị m ịnụ ma ị mee otu ihe ahụ.
Mee ka anyi mara ka imere. Ajụjụ na-esonụ bụ ajụjụ metụtara mmezi. O si n’aka Andy Booth MTB.
Ndewo ysmụ okorobịa, kedu ihe bụ eriri USB dị warara. Ana m ele Jagwire anya ugbu a ma ha nwere nhọrọ isii dị iche iche, site na Standard to Slick Galvanized, Slick Steel, Pro-Polished and Elite, biko nyere m aka ebe m ga-aga? Ọbụna eriri ndị na-agbanwe agbanwe nwere ike ịbụ ebe a na-egwu egwu. Ha niile dịgasị iche iche.
Nke mbụ, m ga-ezere eriri bụ isi nke bụ naanị eriri igwe n'ihi na anaghị ekpuchi ha n'ụzọ ọ bụla. Ha adịghịkwa nchara. Ha ga-aghari na oge ufodu ma ha abughi nke ọma dika eriri ndi ozo, ya mere ha gbatiri otutu nfe karia ogwe aka i nwere.
Ọ bụrụ na ị nwere otu ụlọ nke na-esi na mech gị gaa na njikwa ahụ, ọ bụ nke ọma ka a ga-eji mmanụ griiz ma ọ bụ mmanụ dị na ya mee nke ọma. N'ezie, eriri ndị dị oke ọnụ nwere mkpuchi dị elu dị elu, yabụ nke ahụ pụtara na ha apụọla maka mmịfe dị ogologo. Mana n'ezie, ebe eriri ndị ahụ ka mma bụ mgbe ị nwere eriri USB na -agagharị n'okirikiri gị.
Enwere m GT Force n’oge gara aga. Ezigbo mma ịnyịnya ígwè ịgba ịnyịnya, mana ọ nwere eriri na-agba agba na-agbagharị gburugburu mpaghara nkwado ahụ n'ihi nke a, aghaghị m ịnọgide na-agbanwe eriri ruo mgbe m gbanwere ụzọ ntụgharị ahụ iji nweta ya n'ụzọ m chọrọ ya. Ọ bụrụ na igwe kwụ otu ebe gị nwere ntụgharị eriri pụrụ iche, ịnwere ike ime ka esemokwu dịkwuo oke site na iji ntọala USB dị ka nke a.
Ma ọ bụghị ya, jiri eriri mara mma mara mma. Igwe anaghị agba nchara dị mma ma ọ bụrụhaala na ị ga-enweta ya ihu. Onwe m, achọrọ m ịzụta ndị buru ibu Sholọ ahịa Shop nwere narị ole na ole n'ime ndị a ma ha ga-eme ka m gaa ọtụtụ afọ.
N'ezie, enwere m nke ọ ga-abụ na m nwere afọ ise ma ọ bụ isii ma na-apụ apụ. Nke a kwesịkwara ịtụle. Ezi ajụjụ ebe a site na Florian End, banyere YT Jeffsy m kwuru na oge ikpeazụ.
Ee, ọ dị na sistemụ 1-by-11 nwere akụnụba 9-46c site na e * iri na atọ, mana ị nwere ike iji usoro e-iri na atọ na-agba ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ gaa na SRAM Eagle nwere ezé iri ise? Kedu ka m ga-esi gbakọọ iche? Gaa ebe a, enwere m ike ịpụ ugo na m nwere ike ịpụ e * iri na atọ ka anyị nwee ike ịlele ndị a wee gosi gị ihe dị iche. Maka ndị na-ebido ebido, cassette Eagle, ezé iri na ala, ezé iri ise n’elu, ọ bụ otu mpempe akwụkwọ. Kpamkpam oke.
N'ikwu eziokwu, nnukwu ọrụ injinia. Na otu o si awụnyere na igwe kwụ otu ebe na-ebugharị ya n'ụzọ nkịtị na XD ọkwọ ụgbọ ala ma kesaa ya n'ime ebe. Job mere.
E * iri na atọ dịtụ iche n’eziokwu na o nwere ezé itoolu na ala, yabụ ọ pere ezigbo mpe nke na ọ fọrọ obere ka ọ kwụsie n’ala ka ịgaghị enwe ike idozi otu ụzọ abụọ. Ga-enweta ntọala nchara. Akụkụ elu nke aluminom.
Akụkụ aluminom na-abanye n'otu ụzọ ahụ SRAM cassette ga-enwe mgbanaka mkpọchi onwe ya nke na-ejide ya. Ha na-enye ngwa ọrụ iji chebe ha. Jirizie ụdọ ụdọ abụọ ị ga - ejikọ iji kpokọta kaseti ọ bụla, akụkụ ala ya ga - adaba ma gaa n'ihu.
Ọ bụ usoro dị omimi. Ọ pụtara na ndị nkịtị ị na-eyi na steely, ị nwere ike dochie ha iche na ndị ọzọ nke cassette. Ọ bụ ezigbo usoro, mana ebe ọ bụ ọsọ 11 ọ gaghị enwe oke oke dị ka 12-ọsọ SRAM n'ezie.
Aga m ejegharị n'ime gị na nke a. Itzọ o jiri tụnyere ya bụ na e * iri na atọ kwuru na ọ bụ 9/46, itoolu, 10, 12, 14, 17, 20, 24, 28, 33, 39 na 46. Ma na SRAM, yana 10/50, ị nwere 10, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 32, 36, 42, 50.
N'adịghị ka ịrị elu ya na 42 ruo 50, SRAM dị nro dị nro, yabụ na-agbanwe mgbanwe dị ntakịrị karịa mgbanwe na-enweghị ntụpọ n'etiti nke ọ bụla bụ e * iri na atọ. Otú ọ dị, ihe ndị dị jụụ banyere e * iri na atọ nwere ezé itoolu na ala na nke dị obere karịa n'elu pụtara na ị nwere ike iji obere ihe ịdọ aka iji mee nke yiri nke ahụ Iji jikwaa ọtụtụ gia. Uru nke a bụ ma ọ bụrụ na ịnwe igwe kwụ otu ebe nke nwere ogologo igwe ma ọ bụ ihe nkwado dị ala, ọ na-enye gị ntakịrị ohere.
Will ga-achọpụta na ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya na-agba ọsọ na SRAM Eagle na-ahọrọ nnukwu njikọta n'ihi na nnukwu nchara 50 dị nro nwere ọtụtụ atụmatụ iji mee ka ị bụrụ onye iri na atọ na nke 32-ezé ma e jiri ya tụnyere SRAM nwere ike iji tụnyere a 34 gia. Nke a dabere na igwe elekere 27 nke anụ ọhịa ahụ na nha abụọ, yana taya 2.3 na anụ ọhịa na 170-millimita crank, na-ebugharị cadence nke 80 rpm.
Ogologo mara mma maka oghere dị larịị. Na ntaneti 9-E-13, ị na-aga 23.8 mph, nke ahụ na-enyekwa gị 100.2 sentimita asatọ nke gia.
Nke ahụ bụ, maka otu ntụgharị nke cranks, ị na-akwagharị 100.2 sentimita asatọ. Na 46-sprocket, ọ bụ 4.7 kilomita kwa awa, nke ahụ bụ gearbox nke 19.6-anụ ọhịa.
Na SRAM, na 10-sprocket sprocket, ị na-aga 22.8 mph, na ọ bụ gearbox nke anụ ọhịa 95.8, na 52-sprocket, ọ bụ 4.6 mph na 19.2 '-Gear.
Pụrụ ịhụ na ha yiri nnọọ. N'ezie, ị nwere ike mbanye anataghị ikike na-agbanwe gị yinye size, na ọ ga-enwe dị iche iche utịp dị iche iche wheel nha na crank njikọ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ime nke a n'onwe gị, tụọ ya na Sheldon Brown gia ihe mgbako na ntanetị.
Nwoke a bụ onye na-enyere aka igwe igwe. Onweghi ihe nwoke a choputaghi ma tinye na ntaneti na saiti ya. You nwere ike jupụta ozi a niile maka onwe gị iji dabaa mmasị gị na igwe kwụ otu ebe gị, ị ga-enweta ntakịrị ihe nnọchianya nke ihe ị na-achọ.
Lelee ya, ọ dị ezigbo mma. Ugbu a dị mkpirikpi ajụjụ. Hernan Valverde.
Ọ bụrụ na m jiri wiilị 29 'nke nwere eriri 29 n'ime ụzọ ahụ, enwere m ike iji ọkpọ dochie site na wiil 27'? Ọ bụrụ otu a, gịnị bụ nrụgide taya akwadoro? C c a 26 '- Jiri tube na 29er ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa n'ezie. Nwere ike ịgbatị ya. Cheta na ejiri roba mee ha.
Ha ga-agbatị ma ha ga-adaba. Ana m akwado ndị mmadụ n'agbanyeghị agbanye ụkwụ ha ga-eyi tube na 27 inch. N'ụzọ ahụ, ọ dabara na 27 na ọkara, ma ị nwere ike belata ya ruo 26, buo ya 29.
Ọ bụ etiti. Ọ dabara onye ọ bụla niile Gbaa mbọ hụ na ị nwetakwara ọkpọ a na prọsta Presta kwa, n'ihi na ọ bụrụ na ịchọrọ ibinye onye nwere akara dị iche iche, ọ ga-adaba mgbe niile. Valve Presta na-adaba na oghere Presta na oghere Schrader, ma ọ bụrụ na ị nwere valvụ Schrader ọ ga-adaba na oghere Schrader kachasị ọsọ.
Banyere nrụgide ahụ, ọ nweghị ọdịiche ọ bụla. Ọ bụ eriri roba, ọ dabara 26 'ọkpọkọ na 29er, mana 27' ọkpọkọ dabara onye ọ bụla. Olile anya na nke a baara gi uru.
Na Jo Miller na-ajụ ma ọ bara uru ịgbakwunye nkwado telescopic na hardtail? N'ezie ọ dabere na mmefu ego gị, mana post post mmiri na-agbanwe ụzọ igwe kwụ otu ebe - m kwuola ya na mbụ, aga m aga ikwu na post post nwere mmetụta dị ukwuu n'ụzọ ị gbara ịnyịnya ígwè. otu esi agbago igwe kwụ otu ebe karịa na ndụdụ nkwusioru ihu ma ọ bụrụ na ọ bụ hardtail.
Echere m n'ezie na mgbe ị wedara etiti ike ndọda gị, ị ga-enwe ike ịchịkwa ya. Ọ bụ ụzọ dị nchebe ma dị mma karịa ịkwọ ụgbọala. Ghara ikwu, ọ bụ ọtụtụ ihe ọchị.
Enweghị oge ọ bụla mgbe ị batara na ngalaba wee nwee ntakịrị nchịkwa, ahụ gị dị oke elu ma gaa n'ihu. Can nwere ike ịkọ ihe, ị nwere ike idebe ya na ntabi anya, ọ pụtara na njem gị niile bụ obere ọ isụ. Aga m akwado onye ọ bụla ka ọ jiri post dropper.
N'ikpeazụ, ezigbo ajụjụ nyocha si n'aka Jesus Zambrano. Agụrụ m n'ọtụtụ forums na a na-agbanwe njem nkwụsịtụ nke ndụdụ site na 10 millimeters, nke kwekọrọ na otu ogo nke ntụgharị ihu. Nke ahụ ọ bụ eziokwu? Dịka ọmụmaatụ, enwere m nnukwu ọchịchị nke nwere ogo ogo 65, dị ka geometry mbụ, yana ndụdụ 160.
M na-eji Rockshox Lyrik na 170, nke ahụ pụtara na ntụgharị ihu ahụ dị nwayọ, mana kedu ka m ga-esi atụ ya? Ọ bụ ogo 64 n’ezie? Nke ahụ bụ ụkpụrụ, ee ogo, na ụzọ kachasị mma iji tụọ ya, nke mbụ ịchọrọ ụdị usoro iji tụọ ya. Ahọrọ m otu n'ime ha. Ọ bụ igwe elekere dijitalụ na ị na-etiti ya etiti ọ bụla igwe kwụ otu ebe dị.
Zero na-atụ ya na elu ahụ. N'agbanyeghi uzo obula igbanwee ebe ahu site na ebe ahu, igha enweta akwukwo ziri ezi. Echefula ekwentị m ebe a, enwere ngwa dị iche iche na ngwa ngwa iji mee otu ihe, ọ bụghị ihe ziri ezi na ekwentị dịka onye na-arụ ọrụ dijitalụ kwesịrị ekwesị, mana ị ga-enwerịrị ike ịgụ.
Ọ bụrụ na ịmara ebe ị ga-amalite igwe kwụ otu ebe, ịnwere ike ijide n’aka ịchọpụta ma ọ bụ ogo ma ọ bụ slack abụọ na otu n’ime ngwa ndị a. Tozọ iji tụọ ya, ụfọdụ ndị ga-atụle ya na stipepi ma ọ bụ ndụdụ. Nke a nwere ike ịbụ ihe dịka Rockshox Recon ebe ọdịda ahụ dị n'ihu ndụdụ ahụ, mana mgbe ọdịda ahụ nọ n'ahịrị ọ na-eme ọtụtụ mgbe na ndụdụ ahụ na-apụ ntakịrị ntakịrị ka ọ ghara ịbụ eziokwu.
Easiestzọ kachasị mfe iji mee nke a bụ ị were mgbatị na mmụba na sterọ ọkpọ n'onwe ya. Nke a bụ ụzọ kachasị mma iji chọpụta mgbe ị na-eduzi, ebe isi gị dị. Nke ahụ bụ njedebe nke Jụọ GMBN Tech maka izu a.
Olileanya na e nwere ụfọdụ ezigbo ajụjụ na ya. Biko echefula iziga ajụjụ gị. Adreesị ozi-e ahụ dị ugbu a na ihuenyo ma gbakwunye ya na nkọwa ndị dị n'okpuru - metụtara isiokwu, pịa ebe a maka isiokwu Instagram selfies m.
Ọ bụ maka ịnweta ezigbo foto gị na igwe kwụ otu ebe. Isiokwu mara mma. Peoplefọdụ ndị hụrụ ya n'anya, ụfọdụ kpọrọ ya asị.
Mee ka anyị mata mgbe ịchọtara etu esi echekwa ekweisi gị, nke bụ maka igwe mmezi ụlọ, pịa ụwa niile ka ịdebanye aha mgbe niile n'ihi na ọdịnaya ọhụrụ na-abịara gị kwa izu. Ọ bụrụ n’isiokwu a na-amasị gị ma ọ bụ na ọ na-enye aka, nye anyị mkpịsị aka aka.
Kedu obosara ala mgbodo m chọrọ?
Iji chọpụta ihenhankeokpu nkwado dị mkpa, tụọ ihe dị n'imeokpu akashei na etiti gị, ọ ga - abụ 73mm, 70mm ma ọ bụ 68mm. Fọdụ ochie okpokolo agba nwere ike ịbụ Italian threadedbrackets ala, kama ịbụ Bekee nke ugbu a.
Kedu ihe bụ eri jikọrọ ọnụ?
Zoro okpu bracketsjiri shei nwere imeeriijidethreadedakụkụ. Eku shei nwere ike ịbụthreadedozugbo na shei, ma ọ bụ enwere ike itinye ntinye nke arụnyereeri.Zoro okpu bracketsshells e mere oge na-aga dị iche icheeriụkpụrụ nke anaghị agbanwe agbanwe.Sep 18 2019
Ihe nkwonkwo seramiiki na-eme ihe dị iche?
NaN'alaLine: Ogo ngwakọseramiikibiarin dị mma karịa nchara ígwè dị na igweokpu akangwa n'ihi na hanweebọọlụ gburugburu maka nguzogide dị ala, agbụrụ ka mma maka nkwụsi ike dị ala, ma griiz na-arụ ọrụ nke ọma na obere RPM, obere ọkụ ọkụ maka obere nguzogide. Nov.
Ndi square taper ala brackets di nma?
Square taper ala bracketsnwere ike ịdị ka nkwarụ nke malitere na narị afọ gara aga, mana ha ka bụkacha mmanhọrọ maka metal cranks. Ihe si na ya pụta bụ ọkụokpu aka- mana nnukwu spindle chọrọ ihe ndị ọzọ na crank.Eprel 23 2021
Gịnị ka ala mgbodo nọmba pụtara?
Nanọmba nọmbasitere na site na 86 ruo 132 na-ezo aka na nha aha nke shei na millimeters, nke na-enweghị njikọ na ntanetị pịa nke biarin. Ndị aokpu ala gadịgasị iche na obosara nke uwe uzuzu eji mee obosara dị iche iche.Sep 18 2019
icarus nkiri netflix
Ndị Tange n'okpuru brackets dị mma?
Tangna-eme ka aeziotu maka oke ego. Nzube na ogo dị ka ochie ochie dị elu Shimano square taper units. Daalụ - M lere ha anya, wee hụ naTangSeiki LN-7922 bụ ihe m na-achọ. Ndị a ga-abụ otu ihe nke Shimano UN-72/73Ndị BB.Ọgọst 19 2019
Ego ole ka nkwado ndabere T47?
Typicaldị nkwado T47 dị ala ga-adịru 180g. Igwe kwụ otu ebe ga-achọkwa ntinye aluminom ma ọ bụ aka uwe n'ime etiti ahụ ịnabata T47, ụdị aka uwe ahụ gbasara 100g.
Kedu ihe ntọala T47 eccentric na-eme?
t47 eccentric ala mgbodo Otu eccentric ala mgbodo-enyere gị aka bulie na belata na spindle elu, ma si otú ahụ crank na pedal elu. Isingzụlite na wedata n'ụzọ dị otú a na-agbanwekwa esemokwu olu.
Nwere ike iji nkwado ala T47 na PF30?
N'ime Ndụmọdụ: Ọ bụrụ na ị nwere onye ahịa nwere PF30 ma ọ bụ 386EVO nwere ọkụ nwere ike ịnwe ike ịgba ọsọ T47 site na ya ma wụnye ntọala T47 dị nchebe karị. Nsogbu nwere ike ịsị na sistemụ ndị nwere ike ịpị ihe ntanetị bụ interface dị n'etiti mkpo mgbodo etiti ahụ na iko mpekele onwe ha.